Raw Testosterone Cypionate poda Vagadziri & Vanotengesa - Fakita
Testosterone Cypionate powder inoshandiswa kurapa zviratidzo zve hypo hypoadism muvarume. Mumamiriro ezvinhu aya, varume havaiti zvakakwana zvehomoni yekoro testosterone. Testosterone cypionate inouya chete muchimiro chejairo inogadziriswa yakapiwa musumbu yako.
Raw Testosterone Cypionate powder (58-20-8) Tsanangudzo
Raw Testosterone Cypionate powder, inonzi androgen uye anabolic steroid (AAS) mishonga inoshandiswa kunyanya mukurapa maonero epasi e testosterone muvarume. Inoshandiswawo mune hormone therapy for transgender men.
Mukuwedzera kumashandisirwo ayo ekurapa, Testosterone Cypionate powder inoshandiswa kuvandudza muviri uye kushanda. Chirwere ichi chinhu chinodzora munyika dzakawanda uye saka kusashandiswa kwemishonga kazhinji hakubvumirwi.
Raw Testosterone Cypionate powder inoshandiswa zvikuru ney androgen replacement therapy. Iko ikozvino FDA inobvumirwa kurapwa kwepakutanga kana hypogonadotropic hypogonadism (ingave yekuzvarwa kana kuwanikwa). Kuchengetedzwa kwaro mu andropause (kunonoka-kutanga hypogonadism muvarume) haisati yasimbiswa. Iko ikozvino inoshandiswa kunze kwe-label yekenza yemazamu, kushungurudzwa kwepamu, kunonoka kupera muvakomana, oligospermia (low low sperm count), hormone replacement therapy mune transgender varume, uye osteoporosis.
Kemikari Name 58-20-8; Depovirin; Pertestis; Testosterone cyclopentylpropionate; Testosterone cyclopentanepropionate
muchiso Name Depo-Testosterone
Molecular Wsere 412.6
Kunyorera Point 98 - 104ºC
Biological Half-Life Kuparadzaniswa hafu-hupenyu ndezuva 8
ruvara Yakachena kana kuti inopera white Crystal Powder
Chii chakakosha Testosterone Cypionate powder (58-20-8)?
Testosterone cypionate inoshandiswa pakugadzirwa kwe testosterone nenzira yehutu-hutunganya mafuta 17 (beta) -cyclopentylpropionate ester. Kubatsirwa kwacho kufananiswa nemamwe mabhuku e testosterone ndiyo inononoka yekusunungurwa mushure mejojo ​​uye kwenguva yakareba hafu yeupenyu. Zviratidzo zve testosterone cypionate powder uye testosterone enanthate zvakanyanya kufanana, naizvozvo zvose zviri zviviri zvinowanzove zvisingashandurwi.
Yakajeka sei Testosterone Cypionate powder (58-20-8) mabasa
Testosterone cypionate powder ndeyekirasi yemishonga inonzi androgens. Kirasi yemishonga ndeboka remishonga inoshanda nenzira yakafanana. Iyi mishonga inowanzoshandiswa kubata mamiriro akafanana.
Testosterone cypionate powder inoshandisa kurapa hypogonadism muvarume kuburikidza nokutora testosterone muviri wako usingagoni kuita.
Zvose zvinogona kuwedzerwa uye maitiro ezvinodhaka hazvingabatanidzwi pano. Nhamba yako, fomu yezvinodhaka, uye kuti unowanzoita sei mushonga uyu uchabva pa:
kuti zvakanyanya sei mamiriro ako
manzwiro aunoita kumushandi wokutanga
Mishonga yemishonga uye simba
Strengths:100 mg / mL, 200 mg / mL
Nhamba yeiyo primary hypogonadism
Dhigirii yevakuru (makore ane makore 18 nekure)
Chimiro chekutanga kutora:Nhamba yako inobva pazera rako uye kuongororwa. Chiremba wako achagadzirisa dhiyo kubva pane zvaunoda. Kazhinji, muyero uri 50-400 mg inorovedzwa mumutsipa wako masvondo ose e 2-4.
Nhamba inowedzera:Chiremba wako anogona kugadzirisa muyero wako zvichienderana nehutano hwako hwe testosterone, kupindura kurapwa, nemigumisiro.
Maximum dosage:400 mg inorove mumutsipa wako masvondo ose e2.
Nhamba ye hypogonadotropic hypogonadism
Raw Testosterone Cypionate powder (58-20-8) Bhuku
1). Mwoyo wakachena neropa
Mwoyo wakagadzikana unoputira ropa kune imwe yose yomuviri, zvichipa masumbu uye nhengo nomweya inodiwa kuti zvive nani. Testosterone inobatsira kushandiswa kwemasero ekuropa ropa kuburikidza nefupa remafu. Maestresterone emaodzanyemba akabatanidzwa kune zvakasiyana-siyana zvehutano hwemwoyo.
2). Pashoma mafuta, misi miviri
Testosterone inokonzerwa nekuwedzera musimba mashoma. Leaner mumuviri mashoma anobatsira kudzora kuwanda uye kuwedzera simba.
3). Masimba akasimba
Testosterone inobata basa guru mumapfupa emagetsi. Utachiona hwemapfupa hunoderera sezvo varume vakwegura uye maitiro e testosterone anodonha. Izvi zvinomutsa dambudziko remafupa asina simba uye osteoporosis. Mapfupa akasimba anobatsira kutsigira masimba ako uye nhengo dzomukati, izvo zvinogona kukurudzira mitambo.
4). Kutaura zviri nani, kutaura kwemaitiro, kana kufunga kwemasvomhu
Kutsvakurudza kunoratidza kuti varume vane zviyero zvakanyanya zve testosterone vane hutachiwana hwechirwere cheAlzheimer.
5). Zviri nani libido
Testosterone mazinga anowanzosimuka mukupindura kumutsa kwepabonde uye basa. Varume vane mazinga epamusoro e testosterone kazhinji vanoita zvepabonde zvakanyanya. Varume vakwegura vanoda testosterone yakawanda ye libido uye erectile basa. Asi zvakakosha kucherechedza kuti erectile kusagadzikana kazhinji kunokonzerwa nemamwe mamiriro kana mishonga panzvimbo yepamusoro testosterone mazinga.
6). Kuvandudza mafungiro
Maestrosterone ezasi anowanikwa nehutano hwakashata hwehupenyu. Zvimwe zvezviratidzo zvepasike testosterone zvinosanganisira kuora mwoyo, kuneta, uye kusagadzikana. Asi kumwe kutsvakurudza kunoratidzaTrusted Sourcethat izvi zvingangodaro kune varume vane hypogonadism. Varume avo miviri yavo inotevera kupera kwe testosterone kwenguva yakareba haina kuratidza kuwedzera kwekuora mwoyo.
Migumisiro ye testosterone inoshandiswa pakurapa maitiro inogona kusiyana. Varume vane hypogonadism vakatauraTrusted Chidzidzo Chinovandudza mafungiro uye hukama hwakanaka, uye kuderedza kuneta uye kusagadzikana. Kutsvakurudza kunoratidza kuti kurapwa uku kunogonawo kuva mushonga unorwisa unodzvinyirira.
Tenga Testosterone Cypionate powder kubva kuBuasas.com